Ny Semalt Expert Mahalala Ny Fomba Fitadiavana Anjara-tserasera amin'ny Google Analytics
Namaly ny olon-drehetra ny spam referendum, indrindra fa ny olona iray mitantana tranonkala e-commerce. Rehefa mijery ny angon-tranonkalan'ny Google Analytics ianao, dia afaka manatri-maso ny tranga fitsaboana hita ao amin'ny tranokalanao. Sarotra ny maminavina sy manombantombana ny fahombiazan'ny ezak'akanjonao amin'ny Internet
Toa tsy miasa ny ankamaroan'ny torolàlana momba ny fanesorana spam referrer. Amin'ny tranga maro, ny vahoaka dia manangona vola amin'ny kapila mainty hoditra SEO izay mamoaka ny fifamoivoizana avy amin'ny spam na ny bots. Misy fomba izay afaka manampy anao hisintona ny fifamoivoizana momba ny spam amin'ny Google Analytics.
Ny sasany amin'ireo teknika hiatrehana ilay spam dia voafaritra eto avy amin'i Andrew Dyhan, tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny Customer Success of Semalt - humidity temperature monitoring system.
Inona no lazain'ny spam
Ny tsipika fanamarinana dia ny fifamoivoizana izay tonga amin'ny tranokalanao avy amin'ny sehatra hafa. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, misy backlinking manome tsipika momba ny spam referans ho an'ny mpampiasa. Ny sasany amin'ireo sehatra izay ahitana fitsidihana amin'ny tranonkala sandoka dia avy amin'ny bots na ny tambazotran'ny bots. Ny spam referendum dia mety hitranga amin'ny fomba roa:
Ity spam referral ity dia maneho ny pejy Google Analytics. Toy izany koa, ny fitsidihana ny tranokala hosoka dia mety hipoitra ao amin'ny antontan-kevitra momba ny fanadihadiana fa tsy ao anaty tontolon'ny tranokala. Ireo fitsidihana pejy tsy mitonona anarana dia mamorona pejy fitsangatsanganana ghost.
Misy sehatra sasany mety ahitana basy fitifirana..Ny fitsidihana tranokala avy amin'ny botsika dia mety hitarika mankany amin'ny tranonkala ahafahana mitsidika pejy maro avy amin'ny loharano tsy miankina. Ny botnets sy ny mpitsikilo amin'ny tranonkala dia mety hitarika amin'ny fiantraikany ratsy eo amin'ny tranonkala.
Amin'ny toe-javatra roa, ny torolàlana momba ny fifamoivoizana dia mitarika ho amin'ny fampahalalam-baovao diso momba ny fivoaran'ny fampielezan-kevitra. Ankoatr'izay, ny fitsidihana pejy maro avy amin'ny fitsangatsanganana avy amin'ny spam referral dia mahatonga ny fizotry ny SEO ho sarotra ny manara-maso sy manitsy ny tanjonao iombonana.
Fanesorana spam referrer
Ny olona dia afaka manaisotra ity fifamoivoizana ity amin'ny Google Analytics manaraka ireo dingana tsotra. Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fanaovana io asa io dia amin'ny fametrahana ny .htaccess rakitra ao amin'ny lahatahiry root amin'ny sehatr'asa misy anao. Ity rakitra ity dia mandefa mpitsikilo amin'ny fomba mety hikarakarana ny fangatahanao amin'ny server. Ny olona mampiasa mpampiasa Apache dia afaka mandefa baiko sasantsasany mba hanao izany fanitsiana izany. Tena ilaina ny manara-maso ity dingana ity. Ny fandefasana ny tranonkala manontolo dia mora mora ny mandefa code.
Afaka manampy amin'ny fanesorana spam referrer ny sariohatra amin'ny spam. Ao amin'ny kaonty Google Analytics, afaka mampiasa io endri-javatra io ianao ao amin'ny menio admin. Ankoatra izany, afaka mametraka filaharana mozika amin'ny fitaovana ianao. Ireo sivana ireo dia afaka manakana ny fifamoivoizana avy amin'ny sehatra iray manokana. Azo atao koa ny misakana ny fifamoivoizana amin'ny adiresy IP. Mpanome tolotra mailaka azo antoka dia afaka manampy amin'ny famantatra ireo fanafihana spam sasany mifandraika amin'ny kaonty mailaka mpampiasa.
Ny tsipika fanamarinana dia afaka mampihena ny fahamarinan'ny fampahalalana ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Tena ilaina ny fanesorana ny fifamoivoizana momba ny spam satria ny vokatra hosoka dia mety hitarika ho amin'ny fako. Ankoatra izany, ity fifamoivoizana ity dia mahatonga ny olona hanao fanapahan-kevitra tsy mendrika momba ny fomba fitantanana ny fampielezan-tserasera amin'ny Internet . Zava-dehibe ho an'ny orinasa na orinasa rehetra ny mifandray amin'ny spam referral. Ny sasany amin'ireo hevitra izay azonao ampiasaina mba hanafoanana ny spam referral dia amin'ity torolalana ity.